Fandriam-pahalemana sy fiakaran’ny vidim-piainana : Hapetraka ny « task force » hanara-maso -
AccueilRaharaham-pirenenaFandriam-pahalemana sy fiakaran’ny vidim-piainana : Hapetraka ny « task force » hanara-maso
28/02/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Asa fa tsy kabary hiatrehana ny ho avy hahatsara ny fiainam-bahoaka, io no imasoan’ny governemanta taorian’ny fivoriana “ Team Bulding” izay notanterahina tany Mantasoa, noho izany dia nodinihina teo anatrehan’ ny filankevitry ny governemanta omaly ny fametrehana ireo “task force” miisa roa, dia ny mikasika ny fandriam-pahalemana sy ny mikasika ny fanaraha-maso ny mety ho fampiakarana ny vidin’entana eny an-tsena. Mikasika ity farany dia fantatra izao fa hentitra izy ireo manoloana ny mety ho fanararaotana ataon’ ireo mpivarotra, na ihany koa mpamongady izay minia mampiakatra vidin’entana, na ihany koa ireo izay minia manafy sy mihazona vokatra, ka mampiakatra ny vidin’ entana. Hiaraha-mahalala rahateo fa efa nisy ny fametrahana ny mpanara-maso ny vidim-bary, ary izy ireo no niasa ka nahafahana nahita ireo olona izay ninia nanao ny fanararaotana. Amin’ izao fotoana izao kosa izany dia tsy ny vidim-bary irery ihany no arahi-maso fa eo ihany koa ireo vidin’entana, izay fampiasa andavanandro, izany hoe ny siramamy sy koba sns izany. Izany hoe ireo vokatra rehetra amidy, ka mahakasika ny fiainam-bahoaka tsirairay izany dia harahi-maso avokoa, ary izany dia ezaka izay tanterahin’ny governemanta avokoa.
Mikasika indray ilay “Task Force” mikasika ny fandriam-pahalemana, dia hisy ihany koa ny fivoriana izay hiarahan’ireo tompon’andraikitry ny filaminana isan-tokony, izany hoe ny polisim-pirenena ny zandarimariam-pirenena, ny préfen’ny polisy, tafika. Izy ireo no hametraka ny fomba fiady ahafahan’ ity task force ity miasa, ary izany dia hipetraka avy hatrany eny ifotony, izany hoe ny vahoaka no higoka avy hatrany ny tombontsoa. Raha ny fantatra dia eny anivon’ ny distrika izany no hametrahana ireo “task force” mikasika ny filaminana ireo, hanampy ny efa miadidy ny fandriam-pahalemana tahaka ny polisy eny amin’ ny boriborintany izany. Ho kely lalana tokoa izany ny ratsy, satria dia efa mandeha ny ezaka izany tanterahin’ny fitondram-panjaka amin ny fampandriana fahalemana, ankoatra izay dia ho mandry ivohon’ ny vato ihany koa ny vahoaka amin’ ny paikady izay hapetraka manoloana ireo mpanao asa ratsy
Notontosaina tamin’ny fomba ofisialy omaly tany mahajanga ny andro iraisam-pirenena ho an’ny asa fanaovan-gazety. Taorian’ny nanendrena an- dRahajason Harry Laurent ho ministry ny serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana dia ity no fivoahany voalohany teo ...Tohiny